သက်တန့်ချို: ဒီဇင်ဘာ (၁၇) သို့မဟုတ် ဝေးလွင့်ခဲ့သော ပြက္ခဒိန်စာရွက်များ
၂၇ နှစ် . . အသက်တွေတဖြည်းဖြည်းကြီးရင့်လာပုံ
ဘယ်လိုမှ ရင်ခုန်မရတဲ့ လောက ဓမ္မဓိဌာန်တွေနဲ့
တိမ်စိုင်တွေအဖြစ်ဖန်ဆင်းလို့ . . .
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ရွာချနေမိ . . .
ဒီလိုပါပဲ . . .
ဒီ လို ပါ ပဲ . . .
အရာရာဟာ . . .ဘာမှမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးကွယ်
ရယ်ပြုံးရီငို . . ဒီလောကအိုထဲ
ဒီဇင်ဘာ ၁၇ မှာ . . .
အရာရာမှာ . . တိမ်ခိုး ပြာပြာတွေနဲ့ကွယ် . .
ဘာမှမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးကွယ် . . .
၂၇ နှစ်နဲ့ ဒီဇင်ဘာ ၁၇
အသက်တစ်နှစ် ကြီးမြင့်လွန်မြောက်ယုံကလွဲလို့ . . .
ပြက္ခဒိန်စာရွက်တွေ ပြေးထွက်လွင့်ဝေးသွားယုံကလွဲလို့ . .
လွင့်ပြာ လှုပ်ခတ်မနေဘူး . . .
ပိုင်ဆိုင်ရတာတွေနဲ့ ဆုံးရှုံးလိုက်ရတာတွေ . .
မေမေ ရေ . . .
ကျွန်တော့်မှာ . . ကွက်လပ်ကလေးတွေ
တဖြည်းဖြည်းများလာခဲ့ပြီ . . .
ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်နေ့
မွေးနေ့ ဆိုတဲ့စာလုံးဟာ ငယ်ငယ်ကတည်းက ကျွန်တော့်အဖို့တော့ အစိမ်းသက်သက်ဖြစ်နေခဲ့တယ် ။ သူများ ကလေးတွေလို မွေးနေ့ကိတ်ကလေးတွေလှီး Happy Birthday To You ဆိုတဲ့ သံပြိုင်ဟော် ဟစ် သံလေးတွေဟာ စာအုပ်တွေထဲမှာ ရုပ်ရှင်ဇတ်လမ်းတွေထဲမှာ ပဲ နေသားတကျဖြစ်နေခဲ့တယ် ။ ကျွန်တော် ဟာ မွေးနေ့ ဆိုတာကို မွေးတဲ့တစ်ရက်ကလွဲလို့ ကျန်တဲ့ရက်တွေဟာ အသက် တစ်နှစ်ကြီးမြင့် လွန်မြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက်လေး တစ်ခု တိုးလာယုံကလွဲလို့ ဘာမှ ထူးထူးခြားခြားမရှိပါဘူးလို့ ရိုးရိုးသားသား ထင်မှတ်ထား တဲ့ကောင်ပါ ။ ဒါပေမယ့် အခု ၂၇ နှစ်အတွင်းမှာ ကျွန်တော် ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ တလျှောက်လုံး ပြန်ပြီးငဲ့ကြည့် လိုက်တော့ ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရတာတွေရှိသလို ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာတွေလည်း အများကြီးရှိခဲ့တယ် ။ ရယ်မောခဲ့ တာတွေရှိသလို ငိုကြွေးခဲ့ရတာတွေလည်းရှိခဲ့တယ် ။ ကျွန်တော့်ဘ၀အတွက် ကဗျာလေးတွေဟာ စစ်မှန်သော နားခိုရာဖြစ်ခဲ့တယ် ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တောင်မေ့နေတဲ့ မွေးနေ့ဆိုတဲ့ တစ်ရက်ကို အမှတ်တရ တခုတ်တရ ဆုတောင်းမေတ္တာတွေပို့သပေးကြတဲ့ သူငယ်ချင်း မောင်နှမ မိတ်ဆွေ များ စာဖတ်သူ များအားလုံး ကို ကျေးဇူးများကြီးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ ။ ကျွန်တော့်ဖက်ကပြန်လည်ပေးဆပ်စရာဆိုလို့ စာတွေကို ဒီထက် ပိုပြီး ကောင်းအောင်ရေ့းသားသွားပါ့မယ် လို့ ကတိပေးစရာတစ်ခုပဲရှိပါတယ် ။
၂၇ နှစ်ပြည့်ပြီးနောက်ရက်တွေမှာ ကျွန်တော်ဟာ မကြာခဏ ခရီးတွေထွက်နေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ပို့စ်တင်တွေကျဲသွားနိုင်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့်သည်းခံခွင့်လွှတ်ပေးကြပါဦး စာဖတ်သူများခင်ဗျာ ။ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့မွေးနေ့ဆိုတဲ့အရာဟာ တကယ်ပဲပျော်စရာကောင်းတာလား ဒါမှမဟုတ် ဘာတွေများထူးခြားသလဲ ကျွန်တော်ချရေးကြည့်မိတော့အထက်ပါအတိုင်းကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ထွက်ကျလာတယ် ။
ကျွန်တော့်မွေးနေ့အတွက် သီးသန့် ပို့စ်တင်ပေးကြတဲ့ကဗျာရေးပေးကြတဲ့ ဆုတောင်းပေးကြ တဲ့အမှတ်တ ရစာစု များကို ကျွန်တော်မကြာခင်မှာ ပို့စ်တင်ထားပေးပါ့မယ် အမှတ်တရအနေနဲ့ပေါ့ ။ အားလုံးပဲ စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ ။ လိုတာမရ ရတာမလို လူ့လောက အိုမှာ အသိတရားနဲ့အရှိတရားကို ညီမျှခြင်းချလို့ လူပီသအောင်နေနိုင်ကြပါစေ ။ လူ့လောကအကျိုးသယ်ပိုးလို့ အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝသော ခရီးတစ်ခုကို ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေလို့ လေးလေးနက်နက် ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ ။
Labels: ပြောချင်တာလေးတွေ, မွေးနေ့ဆုတောင်း
သဒ္ဓါလှိုင်း December 17, 2011 at 12:07 PM
အာဂျီးမား December 17, 2011 at 12:37 PM
ိမွေးနေ့ ကဗျာလေးဖတ်သွားတယ်။ happy birthday ပါနော် :)))
အဖြူရောင်နတ်သမီး December 17, 2011 at 1:11 PM
Happy Birthday.. ပါ သက်တန့်ရေ...
cherry December 17, 2011 at 4:53 PM
Happy Birthday! ပါရှင့်....လိုအင်ဆနဒ(ကီးဘုတ်အခက်အခဲကြောင့်)တွေလည်းပြည့်ဝပါစေရှင့်....:)
Lalique December 17, 2011 at 7:06 PM
ကိုအောင်(ပျူနိုင်ငံ) December 17, 2011 at 9:25 PM
mstint December 18, 2011 at 11:39 AM
Happy belated Birthday သက်တန့်ရေ။
တီတင့်မနေ့က မြတ်ဆရာပူဇော်ပွဲနဲ့ တစ်နေ့လုံး
သူ့ကိုလည်း ဒီကနေ့မှ Belated Birthday wish
လောကီလောကုတ္တရာ နှစ်လီနှစ်ဝ လိုအင်ဆန္ဒတွေ
wwmoe December 18, 2011 at 1:05 PM
စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်ပါပြီး လိုရာဆန္ဒ ပြည့်ဝသောသူ
wwmoe December 18, 2011 at 1:14 PM
wwmoe December 18, 2011 at 2:32 PM
စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်ပါ လိုရာဆန္ဒပြည့်ဝသောသူ တစ်ယောက် ဖြစ်ပါစေ။
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! December 18, 2011 at 3:22 PM
နှင်းနဲ့မာယာ December 18, 2011 at 11:58 PM
မင်္ဂလာရှိသော မွေးနေ့ပေါင်းများစွာ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ....